Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i David Rittenhouse | Carl Sagan - Fikarohana momba ny vatana teraka
Case Solved by: Toro-hevitra avy amin'ny Fanahy na Fanahy Ahtun ao amin'ny sehatra i Ryerson-Semkiw
"Misy fitakiana telo eo amin'ny sehatry ny [parapsychology] izay, raha ny fahitako azy, dia mendrika ny hianarana mafy," ny fahatelo amin'izany dia "io Ny ankizy indraindray dia mitatitra ny antsipiriany momba ny fiainana teo aloha, izay rehefa nanamarina dia hita fa marina ary izay tsy ho fantatr'izy ireo tamin'ny fomba hafa noho ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao. " Carl Sagan-1996
Nampidirina ho an'i David Rittenhouse aho fony nikaroka ny tranga vao teraka indray Charles Thomson | Ralph Nader. Thomson dia Revolisionera Amerikanina tany Philadelphia izay niaraka tamin'i Thomas Paine. Paine nonina tany Philadelphia rehefa nanoratra ny bokiny, Common Sense, izay nanazava tamin'ny fomba tsotra fa maniry ny fahaleovan-tena avy any Grande-Bretagne. Ny bokikely dia lasa mpivarotra tsara indrindra izay nanampy ny fiantraikan'ny fihetseham-pony sy ny toeran'ny olona, ​​ary nanampy tamin'ny fanombohana ny Ady Revolisionera.
Amin'ny famakiana ny tantaran'ny Common Sense, Dia naheno aho fa nisy Filadelfia iray nantsoina hoe David Rittenhouse izay efa nanonta. Izany no zavatra fantatro momba an'io lehilahy io, rehefa nanontany momba an'i Rittenhouse aho nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson. Tamin'ny fianjeran'ny 2001, nanontany an'i Ahtun Re aho raha toa ka efa niposaka indray tamin'ny andron'i Rittenhouse indray izao ny Rittenhouse. Rehefa nolazain'i Ahtun Re tamiko fa i David Rittenhouse indray no niorina indray tamin'ny Carl Sagan, dia azoko antoka fa diso izy.
Tamin'izany fotoana izany dia nahatsikaritra aho fa ny fanahy dia miezaka maneho ny tenany amin'ny fomba mitovy amin'izany, hatramin'ny fiainana mandra-pahafatiny, ary nila naneho talenta toy izany izy ireo. Tsy nahatsikaritra ahy fa ny Rittenhouse, izay tsapako fa hoe revolisionera politika malaza Philadelphia, dia hiverina indray amin'ny maha-astronoma malaza manerantany. Natahotra aho fa diso i Ahtun Re ary lasa kivy aho noho ny maha-loharanom-pahamendrehana azy amin'ny fitondrana ny lalao vaovao. Raha ny marina dia nilentika ny foko satria tsapako fa tany amin'ny fiafaran'asa iray hafa aho tamin'ny asako tamin'ny psychic. Saingy izaho no diso.
Rehefa niezaka nikaroka bebe kokoa an'i David Rittenhouse aho, dia hitako fa mpamorona fitaovana izy izay nanamboatra teleskaopy voalohany tany Amerika. Hitako ihany koa fa mpahay matematika izy, izay nifototra tamin'ny fanamarihan'ny teleskaopy, nanangana orrery–Pialohavan'ny planetarium, izay mampiseho ny rafitry ny masoandro amin'ny tena marina. Mbola tsy nahita sarin'i Rittenhouse anefa aho.
Ataovy an-tsaina fa ny fahalavoako dia ny 2001, ny fitaovam-pikarohana toy ny Google izay tsy misy. Ny iray dia tsy maintsy nikaroka ny fomba taloha, tamin'ny alàlan'ny boky sy ny tranomboky.
Rehefa nitsidika an'i Ian Stevenson tao amin'ny 2001 aho, dia nanao teboka ihany koa aho hitsidihana toeram-pizahantany tany Virginie, anisan'izany ny tranon'ny Thomas Jefferson sy James Madison. Nangonin'i Madison ny sarin'ireo olona nandray anjara tamin'ny Revolisiona Amerikana, anisan'izany ny sarin'i Rittenhouse. Tamin'izany fotoana izany, tamin'ny faran'ny 2001, rehefa nahita ny sarin'i Rittenhouse tao an-tranon'i James Madison aho dia nahatsikaritra fa ny tarehin'i Carl Sagan izany.
Izany rehetra izany dia niseho tany am-piandohana tamin'ny asako niaraka tamin'i Kevin Ryerson ary rehefa nahatsapa aho fa nanao io lalao io i Ahtun Re, izay tsapako ho toy ny tsy mazava tsara ankehitriny, dia hitako fa nisy zavatra goavana nitranga; fa nanana loharanom-pahalalana mety hahafantarana marina ireo fanahy tao anatin'ny lasa vao lasa sy ankehitriny.
Endrika ivelany: David Rittenhouse sy Carl Sagan dia manana endrika maneho endrika.
Ny fiainana taloha Talenta sy ny fijaliana: Rittenhouse sy Sagan dia samy mpitarika teo amin'ny sehatry ny astronomia. Ankoatr'izay, samy nihetsiketsika ara-politika izy roa satria nanohana ny Revolisiona amerikana i Rittenhouse ary lasa navitrika i Sagan tamin'ny fanoherana ny Ady Vietnam ary tamin'ny fanaovana lobbying fanoherana ny fitaovam-piadiana nokleary.